Malaimbandy - Lasan'ny jiolahy ny vehivavy iray sy ny zanany harintaona - Ao raha du 12 avril 2019 - RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC, avec sa plainte pour abus des biens sociaux traitée d'urgence qui a permis d'emprisonner de suite Solo son patron et de se voir attribuer ensuite près 428.492 euros par la justice malgache
Accueil Kidnapping à Madagascar Malaimbandy – Lasan’ny jiolahy ny vehivavy iray sy ny zanany harintaona –...
Lasibatry ny jiolahy manodidina ny valo ny vehivavy iray sy ny zanany kely iray, vao herintaona, tao an-tampon-tanànan’i Malaimbady, afak’omaly alina, tokony tamin’ny 11 ora sy sasany. Tsy mbola hita izy mianaka hatramin’ny omaly hariva. Efa tafiditra any amin’ ny kaominina Mandrosonoro-Ambatofinandrahana ireo mpanara-dia any ireo dahalo, omaly.
“Tonga nanafika tao Tsinjorana, fokontany farany atsimo, ao Malaimbandy ireo jiolahy manodidina ny valo nitondra fitaovam-piadiana, tamin’io alina io. Rehefa tsy nahita vola izy ireo dia ny kojakoja ao an-trano sy valizy nisy ny akanjo tao amin’ny tokantrano iray no lasany. Nentin’izy ireo niaraka taminy ihany koa ny vehivavy iray, manodidina ny 30 taona, sy ny zanany, herintaona”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Nohazavain’ny teo anivon’ ny Zandarimaria fa: “tonga haingana teny amin’io toerana io ireo zandary, saingy efa tafaporitsaka ireo jiolahy niaraka tamin’izy mianaka. Araka ny vaovao farany dia efa any Jangina, ao anatin’ny kaominina Mandrosonoro Ambatofinandrahana ireo mpanara-dia androany hariva (Omaly). Nisy valizy iray feno akanjo nalatsak’ ireo jiolahy teny an-dalana”, hoy ny avy amin’ny Zandarimaria. Mitohy ny fanarahan-dia.
Article précédentJiolahy telo naman’i Del Kely no voasambotra tany Tsaratànana – LE JITE DU 10 AVRIL 2019
Article suivantVoasambotra izy dimy lahy nanao fanafihana mitam-basy sy nanolana telo vavy tetsy Andohatapenaka – Inona no vaovao du 12 avril 2019